हामीले यथार्थपरक चलचित्र बनाउनु पर्छ – निर्देशक समुन्द्र भट्ट – Deurali News
जिबन अनि जीवनका भोगाइहरु के हुन् ? ‘सोचे जस्तो हुन्न जीवन, सम्झे जस्तो हुन्न जीवन, जस्तो भोग्यो उस्तै हुन्छ। हाम्रो जीवनको महत्वाकांक्षा, सपना, भोगाई, सोचाई र देखाईको वरिपरि केन्द्रित छ। जीवन जिउनु एक कला हो । जन्मिएपछि हामी एकदिन मर्नुनै पर्छ । तर, हामी हाम्रो जिबनकालमा कस्तो जीवन बाँच्छौं भन्ने कुरा हाम्रो कलाको कुरा हो । कसैले गुणस्तरिय जीवन बाँच्छन्, कसैले बेकारको जीवन बाँच्छ । एउटा भनाई छ, ‘जीवन कति लामो बाँच्छौं, त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन । तर, कस्तो जीवन बाँच्छौं, त्यसले खास अर्थ राख्छ ।’ जन्म पश्चात् जीवनलाई सफल बनाउनु महान वीरता हो । जीवनमा सफलताको लागि इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति र कर्मशक्तिको सदुपयोग गर्नुपर्छ । शुभ इच्छा र त्यसअनुसार कर्म गर्ने व्यक्तिले नै ज्ञान शक्ति प्राप्त गर्छ । जब निराकार आत्मा, साकार शरीर, इन्द्रिय र मनको साथ मिल्छ, तब शरीरमा शक्तिको सञ्चार हुन्छ । जन्म भएपछि आफ्नो पूर्णशक्तिको विकास गर्नु जीवनको लक्ष्य हो । जीवनमा हरेक मानिसको सपना हुन्छ। अधिकांश मानिस आफूलाई सफल, सबल र सक्षम बनाउन चाहान्छन। तर पनि किन हुन्न हरेक मानिसको जीवन सोचे जस्तो ? किन सबै मानिस सफल हुन सक्दैनन् ?
November 24, 2020 Deurali News 0
समुन्द्र भट्टको निर्देशनमा सहिमाको ‘दिल खोलेर नाचिन्छ’ सार्बजनिक(भिडियो सहित)
July 31, 2020 Deurali News 0
हास्य टेलिश्रृंखला ‘दुई स्वास्नीको पोई कुना पसी रोई’ शुभमुहर्त सम्पन्न
December 23, 2020 Deurali News 0